खाली क्रेडिट के मतलब छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki खाली क्रेडिट
रिक्त क्रेडिट के हो?
खाली ऋण बैंकिंग र व्यापार क्षेत्र मा एक प्रसिद्ध शब्द हो। तपाईंले आफैलाई यो अवधारणा सुन्नु भएको छ र खाली क्रेडिट क्रेडिट संपार्श्विक बिना एक ऋण हो। यदि तपाईं बैंकको साथ यो प्रकारको ऋणको विशेष सम्झौताको व्यवस्था गरेको छ भने तपाईले उधारकर्ताको रूपमा रिक्त क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तथापि, यी खाली ऋणहरू विशेष परिस्थितिकासँग सम्बन्धित छन्। सामान्यतया, एक खाली क्रेडिट एक बंधक ऋण र एक समान ऋण संग एक साथ प्रदान गरिएको छ र तपाईं विशेष तरलता सुरक्षित गर्न एक ऋण को रूप मा आवश्यक छ।
रिक्त क्रेडिट क्रेडिट बिना विशेष सुरक्षा हो
यो बैंकहरूमा निर्भर छ कि क्या ऋण प्रदान गर्ने निश्चित छ कि विशेष गरी सुरक्षित हुन्छ। तथापि यो सिद्धान्तमा मात्र साँचो छ, तथापि, किनकि बैंकले बीमा दिनेछ कि खाली रिक्त क्रेडिट तपाईंलाई प्रदान गरिएको छ। यो रिक्त क्रेडिटको विषयमा जब बैंकको उद्यमी जोखिमको बारेमा अधिक छ। त्यसो भए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। यसका बारेमा जानकारी दिईएको छ। तपाईले तपाईको ब्लगको बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ। लाभकारी लेनदेन रिक्त क्रेडिट संग वित्त पोषित छ। बैंक र ग्राहकको व्यक्तिगत क्रेडिट पोर्टफोलियो जस्तै कारकहरू, बैंकको जोखिम-लिने र अन्य तथ्याङ्कहरू तथ्याङ्कले प्रासंगिक छन्। कुनै पनि संपार्श्विक बिना ऋण वा खाली क्रेडिट प्राप्त हुन्छ। तपाईंको बैंकको ईमानदारी कसरी ग्राहकको रूपमा छ? पहिलो प्रश्न हो जुन बैंकको सामना गर्दा रिक्त क्रेडिट प्रदान गर्ने? कतिपय व्यवसायको आफ्नो आफ्नै बैंकसँग सम्बन्धित छन्, र यहाँ महत्वपूर्ण कारकहरू छन् जुन खाली क्रेडिट पनि सुनिश्चित गर्छन्। यद्यपि, वास्तविक शर्तमा कुनै खाली हेडिंग क्रेडिट प्रदान गरिएको छैन, र बैंकले मात्र पुरस्कारमा मात्र खतरा राख्छ। निजी ग्राहक व्यवसायको विपरीत, यस्ता ऋणहरू ग्राहक अनुपात को ग्राहकहरुको जोखिम आकलनमा आवंटित गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस प्रकार यस क्रेडिट को विशेष संपार्श्विक को बिना पनि एक स्कोरिंग छ।
कर्पोरेट ग्राहकहरू र अन्य प्रकारका खाली सम्पत्तिहरू
खास गरी जब तपाईं एक निजी व्यक्ति को रूप मा एक घर ऋण मा रुचि राखछन, कसरि blankodarlehen शब्द को मतलब एक अर्थ हो। अचल सम्पत्ति लेनदेनको र त्यस्ता परियोजनाहरूको अवस्थामा, यो प्रकारको ऋण पनि उपयुक्त छ र कानूनी रूपमा बैंकमा भवन निर्माण कानूनलाई पनि कानूनी रूपमा अनुमति दिइएको छ। फेरि फेरि, हामी असुरक्षित अन्तिम ऋण, प्रावधान ऋण, र ठीक छ निर्दिष्ट नामित खाली ऋण बारेमा कुरा गर्दैछौं। यो प्रकारको क्रेडिटले कर्पोरेट ग्राहक व्यापारमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कर्पोरेट फाइनान्सिंग र अंतरिम वित्तपोषण उद्यमी गतिविधिहरूको लागि महत्वपूर्ण उपकरण हुन्। बैंकहरू आवश्यक तरलता र यस प्रकारको खाली ऋण प्रदान गर्दछ, केवल उपयुक्त ऋणको मामलामा प्रयोग गरिन्छ क्रेडिट ग्राहकहरु लाई। तपाईं आफैलाई कसरी हेर्नुहोस् यी ऋणहरू विभिन्न प्रकारको अंतरिम वित्तपोषणको लागि कसरी प्रयोग गरिन्छ। यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईएको छ। ऋणबाट जम्मा पनि खाली ऋणको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ, जस्तै कि क्रेडिट बिना विशेष सुरक्षा वा तथ्यको रूपमा, विशेष संपार्श्विक बिना। खाली ऋणहरू अक्सर प्रायः बैंकरहरू प्रदान गरिन्छ, जस्तै तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। यो संधै छोटो र असुविधाजनक छोटो अवधि कोष को बारे मा हो। यसैले वास्तविकतामा अल्पकालिक ऋण र पनि ऋण रकम, जुन तिनीहरूको उचाइमा अपेक्षाकृत सीमित छ। बैंकको खतरा व्यवस्थित छ र क्रेडिटपन्थी अनुभवको माध्यमबाट प्राप्त भएको छ र ग्राहकको विश्लेषण पनि।
पहिले नै उल्लेख गरिएको रूपमा, बैंकले यी ग्राहकहरूको विरुद्ध आफैं पनि सुरक्षित गर्दछ। हामीलाई कार डीलरको उदाहरण लिनुहोस् जसले अन्तरिम वित्तपोषणको लागि यस्तो ऋण चाहिन्छ। यहाँ बैंकले सुरक्षाको लागि सोध्नेछ कि गाडीहरूको अक्षरहरू जुन ग्राहकले यी ऋणहरूसँग खरिद गर्दछ। एक इमारत ऋण समान छ, तर सम्पत्ति को भूमि दर्ता मा यस क्रेडिट को कुनै सीधी प्रविष्टि नहीं, जो ग्राहक यिनी फंड संग खरीद गर्छन। यसैले उनी यस प्रकारको क्रेडिटको चरमता देख्छन्।
अघिल्लो लेखकोर कोष
अर्को लेखविदेशी मुद्रा ऋण